सोधिने प्रश्न - Simatech इंक
हामी तपाईं थप जानकारी को लागि हामीलाई सम्पर्क पछि अद्यावधिक मूल्य सूची पठाउने
रेशम फाइब्रोनको sericin फ्री छ?
हाम्रो रेशम फाइब्रोनको सम्बन्धित सबै उत्पादनहरू, degummed रेशम फाइबर, रेशम फाइब्रोनको समाधान र घुलनशील lyophilized रेशम फाइब्रोनको सहित जसको अर्थ यी उत्पादनहरु जैव-सुरक्षा हो र कम immunogenicity छ, मुक्त sericin छन्।
आफ्नो उत्पादनहरु को आणविक वजन के हुन्?
हाम्रो विशेष उत्पादन, रेशम फाइब्रोनको समाधान र घुलनशील lyophilized रेशम फाइब्रोनको दुई आणविक वजन, दुवै 200 भन्दा बढी केडी छन्।
घुलनशील lyophilized रेशम फाइब्रोनको को पानी-विलेयता, घुलनशीलता वा पानी-insolubility के हो?
यो उत्पादन पूर्ण भित्र 12मिनेट ( "उत्पादन" वेबपेज देखि GIF हेर्नुहोस्) पानी मा भंग गर्न सकिन्छ। जैविक सल्वैंट्स अधिकांश लागि, उत्पादन अघुलनशील वा अलिकति लागि hexafluoroisopropanol (HFIP) बाहेक घुलनशील छ।
घुलनशील lyophilized रेशम फाइब्रोनको नाम आफ्नो उत्पादन को स्थिरता के हो?
को शीशी पूर्ण छाप गरिएको छ, lyophilized रेशम उपस्थिति, विलेयता, घुलनशीलता, आणविक वजन वितरण र संरचना को मामला मा लामो समय को कोठा तापमान मा अवधि (> 18 महिना) को लागि स्थिर रहन सक्छ।
कसरी चीन देखि ग्राहकहरु लाई उत्पादनहरु पठाउन?
आदेश उत्पादन FedEx, यूपीएस र डीएचएल सहित अन्तर्राष्ट्रिय एक्सप्रेस कम्पनीहरु द्वारा7दिन भित्र ग्राहकहरु वितरित गरिनेछ।